Sort By default အမိန့် စျေးနှုန်း - အနိမ့်မှအမြင့် စျေးနှုန်း - အမြင့်မှအနိမ့်သို့ နေ့စွဲ - အသစ်သို့အဟောင်း နေ့စွဲ - အသစ်သို့အသစ်
Playa de la Arena၊ Santiago del Teide၊ Tenerife
Playa de la Arena၊ Guia de Isora, Tenerife
Playa de San Juan၊ Guia de Isora, Tenerife
Здравствуйте! ကျွန်ုပ်သည်အထူးကောင်းမွန်သောотпускаимытольковернулись... хотимподелитьсявпечатлениями: Намвсеоченьпонравилось !!! အပန်းဖြေခရီးသွားခြင်းနှင့်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပွဲတော်များကိုဖိုရမ်များမှကူညီပေးခဲ့သည့်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှကလေးငယ်များအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အစ ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိလစ်ပိုင်တွင်ဂစ်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပန်းဖြေစခန်းများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊ အေဂျင်စီမှအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် - လာအို (29 ယူရို), လာအိုနိုင်ငံအလည်အပတ်ခရီးနှင့်အတူကျွန်းများသို့အလည်အပတ်ခရီးသွားရန်လာအို (၂၉ ယူရို)၊ လာအိုပင်လယ်ဓားပြ (၅၇ ယူရို) တွင်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အတူလှေစီးပြေးသွားသောလေယာဉ်နှင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လာအိုနိုင်ငံ၊ вином! Loro Park уребят! သူရပ်တည်ခဲ့သမျှမှာယူရို ၁၁ ရက်သာဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေစွာဖြင့်ဟိုတယ်အနီးရှိရပ်နားရာနေရာကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီး ၆ နာရီလွတ်လပ်သောအချိန်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ 57 ကြိမ်! Впечатленияотшоузашкаливали! အားလုံးэкскурсиибылиначистомрусскомязыке။ всем, чтомыможембытьуверены, чтоостроваивсеэтоагенство! Ужепланируемпоездкутудаже။ ခဏနေတော့မတွေ့သေးဘူး။ Спасиборебятамзапрекрасныйотдыхиудачи!ဆက်ဖတ်ရန်
Лоро-парк Добираться... №325စီစဉ်ခဲ့သည်။ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီဥက္ကМолод္ဌကလူငယ်များအနေဖြင့်ကားဖြင့်ခရီးသွားရာတွင် (၃ နာရီ) နာရီခန့်ကားမောင်းရန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်။ သွားနေရသည်။ экспресс-экспресс။ Мывысказывалисомнение: проявилидорогуподорогимидорогимподороге, проезднаавтобусе 3, သူမလှပတဲ့ ... ဒါပေမယ့်ခိုင်လုံတဲ့အချက်များကစျေးနှုန်းနှင့်အချိန်ကို ကျော်လွန်၍ ဈေးနှုန်းများကိုကား ၀ ယ်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။ ရေဒီယိုမှစိတ်ဝင်စားသူများသည်လူ ၃၂၅ ၏လမ်းမကြီးကိုဖြတ်သန်းသွားသောကားသည်မြို့တော်သို့လာရာမြို့ရှိကားများအနက်နံနက်ခင်းသို့ထွက်ခွာလာသည့်လမ်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ရေတစ်နာရီ ၅ မိနစ် ((၃ နာရီ ၃ မိနစ်ခန့်) မဝေးတော့သည်) သည်ကားဆီသို့ ၉ ဒေါ်လာယူရိုဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Сновапошливагентство။ သမီးလေးကငါတို့ကိုယုံကြည်မိသည်။ ၃၂၅ နာရီ ၃ နာရီလောက်ကြာသည်။ Чтообще, онаживет, тамлибоошиблась, либосоврала! Экспрессвобесторонышелпоюжнойдороге! ပြန်သွားပါ ဦး ။ Нуданичего။ လေယာဉ်ကွင်းသို့ရောက်သောအခါ လော်ရော့စ်ပန်းခြံ (ПуэртоделалаКруз), полторачаса (вовсене 325 !!!) ကိုသွားပြီးနောက်ဘတ်စ်ကားကိုဖြတ်သွားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူသည်မကိုက်ညီကြောင်း၊ဆက်ဖတ်ရန်